देउवाले भने-एमसीसी राष्ट्रघाती छैन , प्रधानमन्त्री भएको ब्यक्तिले राष्ट्रघात गर्नै सक्दैन
सोमबार, माघ ३ २०७८ १०:४० PM
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) राष्ट्रघाती नभएको बताएका छ्न । नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन उद्द्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सो कुरा बताएका हुन ।
एमसीसी राष्ट्रघाती भन्नेहरुले अध्ययन विनै बोलिरहेको प्रधानमन्त्री देउवाले दाबी गरे । उनले भने पहिले पढनु पर्यो,कहाँ छ एमसीसी राष्ट्रघाती ? मैले त कहि देखेको छैन राष्ट्रघाती । देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रको विरुद्द जानै नसक्ने भन्दै उनले थपे म पनि देशको प्रधानमन्त्री हो । म राष्ट्रको खिलाफमा कसरी जान सक्छु ? म राष्ट्र र प्रजातन्त्रका लागि लडेको मान्छे हुँ, म किन राष्ट्रघात हुने सन्धि गरौंला ?
एमसीसीका बारेमा सबै दलहरूसगं छलफल भैइरहेको भन्दै उनले यसका बारेमा थप अध्ययन गर्न आग्रह गरे । एमसीसीका बारेमा पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरुसंग छ्लफल भैरहेकाले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको बताए ।
सित्तैमा आएको यत्रो ठूलो साहेयता लिन्न भन्नू गलत रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । विश्व बैंक , एसियाली विकास बैंक जस्ता दातृ निकायबाट ऋण लिदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी लागु हुने भन्दै उनले एमसीसी सित्तैमा पैसा दिन्छु, नेपालको कानुन मान्छु भन्दा पनि बिरोध गर्नु हास्यास्पद रहेको उनको जिकिर थियो । पहिले बुझ्नु पर्यो क्या । हामी यस बिषयमा थप छ्लफल गरेर पास गर्ने छौ, प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।
आइतबार​ ११ पुस २०७८ ०९:३४ PM मा प्रकाशित